Madaxweynaha Somaliland oo digreeto ku magacaabay Laba degmo – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muddane Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa digreeto madaxweyne ku magacaabay laba degmo oo ka tirsan goboladda Togdheer iyo Awdal.
Digreetaddan ayaa u dhignayd sidan:
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Axmed Maxamed Silaanyo, waxa uu digreeto Madaxweyne oo summadeedu tahayJSL/M/XERM/249-4960/082017 uu maanta ku magacaabay labada degmo.
Markuu Dhegeystay: Soo jeedinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha;
In uu Masalaha Gorad u magacaabo Degmo, taasi oo ka tirsanaan doonta Gobolka Togdheer.
In uu Cali Xaydh u magacaabo Degmo, taasi oo ka tirsanaan doonta Gobolka Awdal.”